Ungayiba njani impembelelo kwiPinterest? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungaba nefuthe njani kwiPinterest?
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 275
Namhlanje, kukho iqela labantu elinokufezekisa yonke into abayifunayo kwiinethiwekhi zonxibelelwano kodwa okona kubaluleke kakhulu, bahambise abantu ngokwento abayenzayo nabayithethayo. Aba bantu baziwa njenge: "abachaphazeli" kuwo onke amandla abanawo okuqhuba iiprojekthi zabo.
Nangona kwezinye iinethiwekhi zentlalo kulula ukuba ube ngumntu ovelisa umxholo osemgangathweni, IPinterest inesinye isakhiwo somsebenzi elenza ukuba ubugcisa bokuchaphazela izimvo bube nzima ngakumbi ebantwini. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukufezekisa iziphumo ezifanelekileyo kwiqonga ngokwalo.
Akusiyo imfihlo nakubani na ukuba namhlanje abantu abaninzi bafuna ukuba ngabona basebenzisi bahle ngayo nayiphi na indleko. Nangona kunjalo, abasebenzisi be-Intanethi bafuna ubunyani ngaphandle kwamanyundululu okwenza aba bantu babe yimizekelo yabo kumaqonga onxibelelwano, anje ngePinterest.
Wenza ntoni umphembeleli kwiPinterest?
Enkosi kubuchwephesha bangoku, izinto ezininzi ezisijikelezileyo zinokwaziwa kwaye zenziwe ngaphandle kwesidingo ukuya kukhangela ezinye izinto. Ngeli xesha, kulula ukwazi ukuba yeyiphi iPinterest ngaphandle kwenyathelo lokudibana nezinye iinjongo.
Yabelana ngezimvo zakho kwaye uzenze ezifanelekileyo
Ukwenza ezakho izimvo zabantu ngumthombo obalulekileyo wophuhliso ngaphakathi kweqonga ngokwalo. Kodwa ukwenza ezi ntlobo zendalo ukuba zibe yinto ebaluleke ngakumbi kunye nokutsala amathuba amatsha ngokungathandabuzekiyo lilangatye elingenakushiyeka ngaphandle.
Ukwazisa malunga nehlabathi langoku
Ukukwazi ukwabelana ngezobugcisa kunye nemibono ngePinterest kuxhase amakhulu abantu abatsha ukuba babe ngumzekelo kuluntu lwanamhlanje. Ngokuqinisekileyo ezi zikwazile ukunceda abasebenzisi ukuba boyise uloyiko, landela amaphupha akho kwaye wenze umgca wolwazi ukukhathalela into esiyiyo nesinayo.
Ndingaba njani umphembeleli wePinterest?
Enye yezinto ezinokutsala umdla kweliqonga kukuba imifanekiso yobuqu yabaphembeleli ayizukuvela. Ngapha koko, abantu baya kutsalwa zizimvo zokubonisa.
Ukusuka apho kuza impembelelo yeekhonsepthi kodwa ngaphezulu kwako konke, yeembono kunye namaphupha aya kuthi anike indlela kwinto abafuna ukuyifezekisa yonke imihla.
Okukhona umxholo uvelisiwe, ulwalamano olungcono onokuthi ulwenze nabaphulaphuli lube lulo phakathi kwezona zifunwa ngabantu. Ngaphandle kwamathandabuzo, lithuba legolide elinokutsala umdla kwihlabathi lanamhlanje.
Yenza imixholo esemgangathweni
Sukugqogqa izimvo zabanye abantu, eyona meko inokukunceda kukusebenzisa umxholo wakho ngokusekwe kwiinyani ozenzileyo ngaphambili. Abantu bayathanda ukubona amabali anesiphelo sokwenyani, nokuba bonwabile okanye cha.
Gcina idashboard yakho iququzelelwe
Ukuba uveza izimvo zakho ngokuzithemba nangokufutshane, bonke abasebenzisi bayakuthanda ukubona indawo yakho rhoqo. Oku kuyakwenza enye yezona ndawo zisetyenziswa kakhulu yanamhlanje.
1 Wenza ntoni umphembeleli kwiPinterest?
1.1 Yabelana ngezimvo zakho kwaye uzenze ezifanelekileyo
1.2 Ukwazisa malunga nehlabathi langoku
2 Ndingaba njani umphembeleli wePinterest?
2.1 Nxibelelana nabasebenzisi
2.2 Yenza imixholo esemgangathweni
2.3 Gcina idashboard yakho iququzelelwe
Uncokola njani nabahlobo ngeYouTube?
Ndifuna ukubona iifoto zeprofayile ze-Instagram